परीक्षामा छात्राले यस्तो जवाफ लेखेपछि जाँच्ने शिक्षक नै झन्डै ढले ! - Online Palanchok
परीक्षामा छात्राले यस्तो जवाफ लेखेपछि जाँच्ने शिक्षक नै झन्डै ढले !
यस्तै अनौठो घटना सामाजिक संजालबाट सार्वजनिक भएको छ । भारतको हैदराबाद्को यो घटना परीक्षा हलमा आएपछि कुनै उपाय नलागेपछि यी छात्राले यतिसम्म आश्चर्यजनक काम गरेकी छिन । यी छात्राले आफ्नो लागि त निकै राम्रो उत्तर लेखिन होला तर के कोही नयाँ गीत लेख्दैमा पास होला र ? यी छात्राले सुरुदेखि अन्तिमसम्म केवल बलिउडका गीत लेखेकी छिन् ।
उत्तर पुस्तिकाको अन्त्यमा भने यी छात्राले आफ्नो गरिबीको हवाला दिँदै पास गराइदिन गुहारसमेत मागिन । यो कपी परीक्षण गर्ने शिक्षकले यी छात्राको गुहार त मानेनन् बरु यो कापी नै परीक्षा अधिकारीलाई बुझाइदिए । यो उत्तर पुस्तिकाको केही अंश अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । सामाजिक संजालमा यो उत्तर पुस्तिका जाँच्ने शिक्षक नै झन्डै ढलेनन् भन्दै फोटो भाइरल भइरहेको छ यद्यपि यो कुराको पुष्टि भने कतैबाट भएको छैन ।
Prevफिल्मको स्टार भन्दा कम छैनन् मोडल दुर्गेश, कमाउँछन् लाखौ, राख्छन् बडीगार्ड(भिडियो सहित)
Nextपोखरामा उड्ने ट्याक्सी ! हेर्नुहोस कहाँ जान कति भाडा लाग्छ ? (भिडियो)